Volana sy Kintana – FJKM Ambavahadimitafo Volana sy Kintana |
Misaotra an’Andriamanitra lehibe ny Volana sy kintana raha afaka namangy ny FJKM Ambatotokana ny alahady 08 septambra 2013, niaraka tamin’ireo ankizy marobe taizaina eo anivon’izany sampana izany. Mankasitraka ny mpitandrina Rakotoniera mivady sy ny biraom-piangonana ary ireo izay nitondra am-bavaka ka nanohana izany asa izany.
Hisy ny krismasim-paritra izay atao ao amin’ny FJKM Ambohitantely ny alahady 21 Febroary 2010 manomboka amin’ny 14h izay handraisan’ny Sampana STA ary Volana sy Kintana anjara. Noho izany hisy ny famerenana ny alarobia 17 Febroary 2010 sy ny asabotsy 20 Febroary 2010 ao amin’ny Akany Ralibera Daniel, entanina ny ankizy mba ho tonga maro amin’izany.
Ny STA sy ny STK ary ny Volana sy Kintana dia manao izao filazana izao fa manomboka ny alahady 18 Oktobra 2009 isaky ny amin’ny 2:30 tolakandro ny fianarana ny Fety krismasy. Koa manentana ny Ray aman-dreny mba handefa ny ankizy ho amin’izany. Ilazana koa ireo olona mikasa hampanao hira manokana ny zanany, fa hatramin’ny
Fotoana hiarahana amin’ny ankizy afa-panadinana Antsoina isika mpikambana ao amin’ny Volana sy Kintana fa amin’ny sabotsy 31 oktobra 2009 izao dia hisy fitsangatsanganana miaraka amin’ireo ankizy afa-panadinana. Ny fandraisan’anjara dia Ar 4000, tsy mitondra sakafo fa mitondra fitaovam-pihinanana sy rano sotroina. Eny Faravohitra Avaratra ny toerana amin’izany.